တစ္ဆေဝင်ပူးခြင်း နဲ့ သိပ္ပံအမြင် ..! - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / တစ္ဆေဝင်ပူးခြင်း နဲ့ သိပ္ပံအမြင် ..!
တစ္ဆေဝင်ပူးခြင်း နဲ့ သိပ္ပံအမြင် ..!
Apann Pyay 8:06 PM ပရလောကအကြောင်း Edit
“တစ္ဆေဝင်ပူးခြင်း” ဆိုတာကတော့ အခြားလောကက မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ခုခုက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်ပြီး အဲ့ဒီလူမလုပ်မယ့် အရာတွေ လုပ်ဆောင်သွားတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရပါမယ်။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ အတော်အတန်နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး အလယ်ခေတ်ကစလို့ တစ္ဆေဝင်ပူးခြင်း(demonic possession) ဆိုပြီး စတင်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ နာမည်ကျော် Exorcist ကားထဲမှာဆိုရင်လဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ဝင်ပူးခံရပြီးရင် အခြားသော ဘာသာစကားများပါ ပြောဆိုလာနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ထက် ပိုမိုသန်မာတဲ့ ခွန်အားတွေ၊ အစွမ်းတွေ ရှိနေတာဟာ အံ့သြစရာပါ။
အခုဆိုရင်လဲ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီကိစ္စကို အသဲအသန် ကြုံတွေ့နေရတာကို ကြားမြင်နေရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနည်းငယ်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီကိစ္စဟာ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာသာရေးနည်းလမ်း နဲ့ ဆေးပညာနည်းလမ်း ပါပဲ။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဘာသာရေးတော်တော်များများမှာ ဒီကိစ္စဟာ လက်ခံထားတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လောကမှာမရှိတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်ပူးပြီး သူပြောချင်တဲ့စကားများ၊ သတိပေးမှုများ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်တတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပရိတ်ရည်ဖြင့် ပက်ဖျန်းခြင်း၊ ကြိမ်လုံးဖြင့် ရိုက်နှက်၍ ထိုမကောင်းဆိုးဝါးဟာ ပြန်လည်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ကြိမ်းမောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။
အလယ်ခေတ် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း(အထူးသဖြင့် ဥရောပ)မှာတော့ တိရိစ္ဆာန်သို့မဟုတ် လူတစ်ယောက်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးခြင်းခံလိုက်ရပြီဆိုရင် အောက်ပါ ဖြစ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်တတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
– ဘာမှန်းမသိရသောဘာသာစကားများဖြင့် ပြောဆိုခြင်း၊ ကျိန်စာတိုက်ခြင်း
– သာမန်အခြေအနေနဲ့ မလုပ်ဆောင်နိုင်သော အရာများကို လုပ်ဆောင်ပြခြင်း
– သင့်စိတ်ကို ဖတ်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် အနာဂတ်ကို ပြောပြခြင်း
– လက်ဝါးကပ်တိုင် သို့မဟုတ် ဘုရားရုပ်တု၊ပုံများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း
– ဘုရားစာကို လုံးဝ မရွတ်နိုင်ခြင်း
– မတန်တဆ တံတွေးထွေးခြင်း သို့မဟုတ် အော့အန်ခြင်း
စသည်တို့ကို လုပ်တတ်တယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေ တစ္ဆေပူးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းချက်ကတော့ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
၂) ဆေးပညာရှုထောင့်မှ ဖြေရှင်းခြင်း
တစ္ဆေပူးခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ဆေးပညာက ဖြေရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းစဉ်ပေါင်းများစွာနဲ့ ခွဲပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကတော့ စိတ်ပညာများနဲ့သာ သက်ဆိုင်နေပါလိမ့်မယ်။ အချို့သော ခေါင်းစဉ်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Hysteria : Hysteria ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုများ ဖြစ်ခြင်းလို့ အပေါ်ယံဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကြောက်ရွံ့မှုများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Hysteria ကို psychosomatic, functional, nonorganic နဲ့ psychogenic စသဖြင့်လဲ အမျိုးမျိုးခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Mania : Mania ဆိုတာကတော့ စိတ်ဓာတ်အရမ်းပြင်းထန်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလွန်အမင်းခွန်အားပြည့်ခြင်း(energetic) ဖြစ်ပြီး သာမန်အတွေးအခေါ်များနဲ့ မတူအောင် တွေးခေါ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်လာပါတယ်။
Psychosis : ဆိုက်ကိုစစ် ရှိတဲ့ လူတော်တော်များများဟာ ထင်ယောင်ထင်မှားတွေ မြင်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်ရှိမနေတဲ့အရာကို ရှိတယ်ဆိုပြီး တွေးထင်မြင်ယောင်နေတတ်ကြပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ အရိုးစွဲနေတဲ့ လွဲမှားသော ယုံကြည်မှုများ နဲ့ အတွေးအခေါ်များကြောင့် ထိုမြင်ကွင်းတွေကို သူတို့ဟာသူတို့ ဖန်တီးယုံကြည်သွားလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူတို့ရဲ့ personality တွေပါ ပြောင်းလဲလာပါတယ်၊ အတွေးအခေါ်များ မမှန်တော့ပဲ သူ့ကို နားလည်ဖို့ ခက်လာပါတယ်။ ဒီလိုလက္ခဏာတွေဟာ တစ်ခုတည်းလဲဖြစ်တတ်သလို ပေါင်းစပ်ပြီးလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Schizophrenia : Schizophrenia ရှိတဲ့လူများဟာ အမှန်တကယ်ရှိတဲ့အရာနဲ့ မရှိတဲ့အရာများအပေါ်မှာ တမူထူးခြားတဲ့ အတွေးအခေါ်များပိုင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ အပြုအမူများ၊ အတွေးအခေါ်များ၊ စိတ်ခံစားမှုများ စတဲ့နေရာတွေမှာ ပြသနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Schizophrenia ပြင်းထန်တဲ့လူများဟာ အမှန်တရားနဲ့ဝေးကွာတဲ့ လောကတစ်ခုမှာ နေနေရသလို ဖြစ်သွားပါတယ်
Dissociative identity disorder : ဒီခေါင်းစဉ်ကို နှစ်မျိုးထပ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ Neutral Identity States (NIS) နဲ့ Traumatic Identity States (TIS) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NIS ရှိထားသူများဟာ သူလုပ်ထားတဲ့ အရာတော်တော်များများကို မေ့နေတတ်ပါတယ်။ TIS သမားများကတော့ တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်နေရင်းတန်းလန်းနဲ့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။
အားလုံးထဲမှာ တစ္ဆေဝင်ပူးခြင်းအတွက် အဖြစ်နိုင်ဆုံး သို့မဟုတ် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ရပ်ကတော့ Mass hysteria ခေါ် collective hysteria ပဲဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်စ အမျိုးသမီးများမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများပြားခြင်း အဆိုပါအချိန်မျိုးတွေမှာ မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲ မိမိစိတ်ထဲမှာ စွဲနေတဲ့ ပုံစံတစ်မျိုး(တစ္ဆေကဲ့သို့ ပြောဆိုပြုမူခြင်း) ကို ဖွင့်ထုတ် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ၁၅ ရာစုနဲ့ ၁၇ ရာစုကြားမှာ ဥရောပတိုက်မှာ ဒီလိုကိစ္စကြောင့် တစ္ဆေဝင်ပူးတယ်လို့ဆိုကာ ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးပေါင်းဟာ ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Occam’s Razor ဆိုတဲ့ သီအိုလော်ဂျီတစ်ခုရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ရုတ်တရတ် နားလည်ရခက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ကြုံတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီအတွက် ဖြေရှင်းချက်ကို လွယ်ကူပြီး ခေါင်းရှုတ်မခံရတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကို ထစ်ထစ်ချယုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အခြားသော ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို ထပ်မံစဉ်းစားဖို့ သူဟာ စိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူး။ ဥပမာ သင်တစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာ အိမ်တံခါးဟာ သူ့ဟာသူ ပွင့်သွားပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ခေါင်းထဲမှာ ပထမဆုံးပေါ်လာမယ့် ဖြေရှင်းချက်ကတော့ သရဲဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုပါပဲ။ အခြားသော ဖြေရှင်းချက်တွေကို ထပ်မံစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လေတိုက်တာလဲဖြစ်နိုင်သလို တံခါးချက်ထဲက ချောစီမမျှလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများဟာ ပထမအဆင့်မှာတင် ရပ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
Credit:Thar Htet Aung
“တစ်ဆဝေငျပူးခွငျး” ဆိုတာကတော့ အခွားလောကက မကောငျးဆိုးဝါးတဈခုခုက လူတဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲကို ဝငျပွီး အဲ့ဒီလူမလုပျမယျ့ အရာတှေ လုပျဆောငျသှားတယျလို့ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ရပါမယျ။ ဒီလိုဖွဈစဉျဟာ ကမ်ဘာတဈဝနျးမှာ အတျောအတနျနာမညျကွီးခဲ့ပွီး အလယျခတျေကစလို့ တစ်ဆဝေငျပူးခွငျး(demonic possession) ဆိုပွီး စတငျချေါဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ နာမညျကြျော Exorcist ကားထဲမှာဆိုရငျလဲ တဈစုံတဈယောကျဟာ ဝငျပူးခံရပွီးရငျ အခွားသော ဘာသာစကားမြားပါ ပွောဆိုလာနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ လူတဈယောကျထကျ ပိုမိုသနျမာတဲ့ ခှနျအားတှေ၊ အစှမျးတှေ ရှိနတောဟာ အံ့သွစရာပါ။
အခုဆိုရငျလဲ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဒီကိစ်စကို အသဲအသနျ ကွုံတှနေ့ရေတာကို ကွားမွငျနရေပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျောအနညျးငယျလလေ့ာကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ဒီကိစ်စဟာ နညျးလမျးနှဈမြိုးနဲ့ ဖွရှေငျးပွနိုငျတယျလို့ တှရေ့ပါတယျ။ ဘာသာရေးနညျးလမျး နဲ့ ဆေးပညာနညျးလမျး ပါပဲ။
ကမ်ဘာတဈဝနျးက ဘာသာရေးတျောတျောမြားမြားမှာ ဒီကိစ်စဟာ လကျခံထားတဲ့ အရာတဈခုဖွဈနပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ လောကမှာမရှိတဲ့ မကောငျးဆိုးဝါးက ခန်ဓာကိုယျထဲကို ဝငျပူးပွီး သူပွောခငျြတဲ့စကားမြား၊ သတိပေးမှုမြား၊ ခွိမျးခွောကျမှုမြား ပွုလုပျတတျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ပရိတျရညျဖွငျ့ ပကျဖနျြးခွငျး၊ ကွိမျလုံးဖွငျ့ ရိုကျနှကျ၍ ထိုမကောငျးဆိုးဝါးဟာ ပွနျလညျခွိမျးခွောကျခွငျး၊ ကွိမျးမောငျးခွငျးမြား ပွုလုပျတတျပါတယျ။
အလယျခတျေ ကမ်ဘာတဈဝနျး(အထူးသဖွငျ့ ဥရောပ)မှာတော့ တိရိစ်ဆာနျသို့မဟုတျ လူတဈယောကျဟာ မကောငျးဆိုးဝါးဝငျပူးခွငျးခံလိုကျရပွီဆိုရငျ အောကျပါ ဖွဈရပျမြားကို လုပျဆောငျတတျတယျလို့ သိရပါတယျ။
– ဘာမှနျးမသိရသောဘာသာစကားမြားဖွငျ့ ပွောဆိုခွငျး၊ ကြိနျစာတိုကျခွငျး
– သာမနျအခွအေနနေဲ့ မလုပျဆောငျနိုငျသော အရာမြားကို လုပျဆောငျပွခွငျး
– သငျ့စိတျကို ဖတျရှုခွငျး သို့မဟုတျ အနာဂတျကို ပွောပွခွငျး
– လကျဝါးကပျတိုငျ သို့မဟုတျ ဘုရားရုပျတု၊ပုံမြားကို ကွောကျရှံ့ခွငျး
– ဘုရားစာကို လုံးဝ မရှတျနိုငျခွငျး
– မတနျတဆ တံတှေးထှေးခွငျး သို့မဟုတျ အော့အနျခွငျး
စသညျတို့ကို လုပျတတျတယျလို့ ရေးသားဖျောပွကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဘာသာရေးရှုထောငျ့ကနေ တစ်ဆပေူးခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖွရှေငျးခကျြကတော့ ဒီလောကျဆို လုံလောကျပွီလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
၂) ဆေးပညာရှုထောငျ့မှ ဖွရှေငျးခွငျး
တစ်ဆပေူးခွငျးဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျတဈခုကို ဆေးပညာက ဖွရှေငျးကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ခေါငျးစဉျပေါငျးမြားစှာနဲ့ ခှဲပွီး ဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ကတော့ စိတျပညာမြားနဲ့သာ သကျဆိုငျနပေါလိမျ့မယျ။ အခြို့သော ခေါငျးစဉျမြားကို ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
Hysteria : Hysteria ဆိုတာကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကို မထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ စိတျခံစားမှုမြား ဖွဈခွငျးလို့ အပျေါယံဘာသာပွနျနိုငျပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့တော့ ကွောကျရှံ့မှုမြားဖွဈတတျပါတယျ။ Hysteria ကို psychosomatic, functional, nonorganic နဲ့ psychogenic စသဖွငျ့လဲ အမြိုးမြိုးချေါဆိုနိုငျပါတယျ။
Mania : Mania ဆိုတာကတော့ စိတျဓာတျအရမျးပွငျးထနျခွငျးရဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတဈခုဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ အလှနျအမငျးခှနျအားပွညျ့ခွငျး(energetic) ဖွဈပွီး သာမနျအတှေးအချေါမြားနဲ့ မတူအောငျ တှေးချေါခွငျးမြား လုပျဆောငျလာပါတယျ။
Psychosis : ဆိုကျကိုစဈ ရှိတဲ့ လူတျောတျောမြားမြားဟာ ထငျယောငျထငျမှားတှေ မွငျလရှေိ့ပါတယျ။ တကယျရှိမနတေဲ့အရာကို ရှိတယျဆိုပွီး တှေးထငျမွငျယောငျနတေတျကွပါတယျ။ တျောတျောမြားမြားကတော့ အရိုးစှဲနတေဲ့ လှဲမှားသော ယုံကွညျမှုမြား နဲ့ အတှေးအချေါမြားကွောငျ့ ထိုမွငျကှငျးတှကေို သူတို့ဟာသူတို့ ဖနျတီးယုံကွညျသှားလရှေိ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တဈခါတဈရံမှာ သူတို့ရဲ့ personality တှပေါ ပွောငျးလဲလာပါတယျ၊ အတှေးအချေါမြား မမှနျတော့ပဲ သူ့ကို နားလညျဖို့ ခကျလာပါတယျ။ ဒီလိုလက်ခဏာတှဟော တဈခုတညျးလဲဖွဈတတျသလို ပေါငျးစပျပွီးလဲ ဖွဈတတျပါတယျ။
Schizophrenia : Schizophrenia ရှိတဲ့လူမြားဟာ အမှနျတကယျရှိတဲ့အရာနဲ့ မရှိတဲ့အရာမြားအပျေါမှာ တမူထူးခွားတဲ့ အတှေးအချေါမြားပိုငျဆိုငျနခွေငျးဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီရောဂါဟာ အပွုအမူမြား၊ အတှေးအချေါမြား၊ စိတျခံစားမှုမြား စတဲ့နရောတှမှော ပွသနာတှဖွေဈတတျပါတယျ။ Schizophrenia ပွငျးထနျတဲ့လူမြားဟာ အမှနျတရားနဲ့ဝေးကှာတဲ့ လောကတဈခုမှာ နနေရေသလို ဖွဈသှားပါတယျ
Dissociative identity disorder : ဒီခေါငျးစဉျကို နှဈမြိုးထပျခှဲနိုငျပါတယျ။ Neutral Identity States (NIS) နဲ့ Traumatic Identity States (TIS) တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ NIS ရှိထားသူမြားဟာ သူလုပျထားတဲ့ အရာတျောတျောမြားမြားကို မနေ့တေတျပါတယျ။ TIS သမားမြားကတော့ တဈစုံတဈခုကို လုပျနရေငျးတနျးလနျးနဲ့ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတာ ပွနျစဉျးစားတတျကွပါတယျ။
အားလုံးထဲမှာ တစ်ဆဝေငျပူးခွငျးအတှကျ အဖွဈနိုငျဆုံး သို့မဟုတျ အဖွဈအမြားဆုံးဖွဈရပျကတော့ Mass hysteria ချေါ collective hysteria ပဲဖွဈပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အမြိုးသမီးမြားမှာဖွဈတတျပါတယျ။ အပြိုဖျောဝငျစ အမြိုးသမီးမြားမှာ အဖွဈမြားပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဟျောမုနျးပွောငျးလဲခွငျး၊ စိတျဖိစီးမှုမြားပွားခွငျး အဆိုပါအခြိနျမြိုးတှမှော မိမိကိုယျမိမိ ထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးမရှိတော့ပဲ မိမိစိတျထဲမှာ စှဲနတေဲ့ ပုံစံတဈမြိုး(တစ်ဆကေဲ့သို့ ပွောဆိုပွုမူခွငျး) ကို ဖှငျ့ထုတျ လုပျဆောငျလရှေိ့ပါတယျ။ ၁၅ ရာစုနဲ့ ၁၇ ရာစုကွားမှာ ဥရောပတိုကျမှာ ဒီလိုကိစ်စကွောငျ့ တစ်ဆဝေငျပူးတယျလို့ဆိုကာ ကှပျမကျြခံခဲ့ရတဲ့ အမြိုးသမီးပေါငျးဟာ ထောငျနဲ့ခြီပွီး ရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Occam’s Razor ဆိုတဲ့ သီအိုလျောဂြီတဈခုရှိပါတယျ။ လူတဈယောကျဟာ ရုတျတရတျ နားလညျရခကျတဲ့ ဖွဈရပျတဈခုကို ကွုံတှလေို့ကျပွီဆိုရငျ အဲ့ဒီအတှကျ ဖွရှေငျးခကျြကို လှယျကူပွီး ခေါငျးရှုတျမခံရတဲ့ ဖွရှေငျးနညျးတဈခုကို ထဈထဈခယြုံကွညျ့လိုကျပါတယျ။ အခွားသော ဖွဈနိုငျခတြှေကေို ထပျမံစဉျးစားဖို့ သူဟာ စိတျမဝငျစားတော့ပါဘူး။ ဥပမာ သငျတဈယောကျတညျးရှိနတေဲ့အခြိနျမှာ အိမျတံခါးဟာ သူ့ဟာသူ ပှငျ့သှားပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ သငျ့ခေါငျးထဲမှာ ပထမဆုံးပျေါလာမယျ့ ဖွရှေငျးခကျြကတော့ သရဲဖှငျ့လိုကျတယျဆိုပါပဲ။ အခွားသော ဖွရှေငျးခကျြတှကေို ထပျမံစဉျးစားကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ လတေိုကျတာလဲဖွဈနိုငျသလို တံခါးခကျြထဲက ခြောစီမမြှလို့လဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တျောတျောမြားမြားဟာ ပထမအဆငျ့မှာတငျ ရပျသှားလရှေိ့ပါတယျ။